आत्मविश्वास बढाउन शिव खेडाले दिएका यी सजिला सुत्रहरु - ज्ञानविज्ञान
नोट: माथि उल्लेखित जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
Don't Miss it यस्ता छन् अमलाका अमुल्य फाइदाहरू जान्नुहाेस्
Up Next तपाइकाे सुत्ने तरीका कतै गलत त छैन ? जान्नुहाेस्
शरीरमा आवश्यक प्रोटिनको मात्रा पुगे/नपुगेको यसरी थाहा पाउनुहोस्, जानी राखौँ
प्रोटिन शरीरलाई नभई नहुने पोषक तत्व हो । अङ्ग, मांसपेशी, स्नायु प्रणाली तथा प्रतिरक्षा प्रणाली धेरै हदसम्म प्रोटिनमा भर पर्छन्…